विचार/विश्लेषण – Hot Post News
Tuesday, December 10News That Matters
घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरुको नियत प्रती घृणा लाग्छ- सिम्रन भट्ट
भनिन्छ मानिसको जीवनमा सुख दुख आउँछन् जान्छन् । मानिस सधै भरि सुखी पनि हुदैन् र दुखी पनि हुदैन् न अजम्बरी हुन्छ मान्छे त् नासिक हो । जिवनमा आएका आरोह अबरोह अनेक स्मरणीय यात्रा जुन मेरो लागि अझै कापी छन । मान्छेको जीवन पुर्ण छैन । मान्छे अनेको कुराको खोजिमा हुन्छ सन्तुष्टि कहिले हुन सक्दैन मान्छे । हिजोसम्म एक छाक टार्नको लागि दु:ख गरेर बसेको मान्छे दुई छाकसम्म पुर्याउछ । अझै सन्तुष्टि हुदैन दिनमा सात पटक भोजन गर्नको लागि दौडिरहेको हुन्छ । असम्भव त केही छैन सम्भव छ । गोर्खा जिल्ला आरु चनौटेमा जन्मिएकी म । मध्यम परिवार त्यही माटोमा हुर्किए,कति पटक चिप्लिए,गाउँ कै स्कुलमा क ख रा पढे,मेलापात सकेसम्म गरे पनि । घरकी जेठी छोरिको रुपमा जन्मिएकी म मेरो छरछिमेक,आमाबुबा ,दाजुभाइ दिदिबहिनीबाट भने साथ सपोर्ट र अथाह माया अनि प्रेरणा पाएकी छु । सायद त्यसैले होला जता गए पनि मलाई मायाको कमि हुदैन । मान्छ
Dec32019 by onlinenewsNo Comments
घरमा श्रीमती हुँदा-हुँदै परस्त्रीलाई श्रीमती भन्न सक्ने केटाहरु प्रती घृ’णा लाग्छ
भनिन्छ मानिसको जीवनमा सुख दुख आउँछन् जान्छन् । मानिस सधै भरि सुखी पनि हुदैन् र दुखी पनि हुदैन् न अजम्बरी हुन्छ मान्छे त् नासिक हो । जिवनमा आएका आरोह अबरोह अनेक स्मरणीय यात्रा जुन मेरो लागि अझै कापी छन । मान्छेको जीवन पुर्ण छैन । मान्छे अनेको कुराको खोजिमा हुन्छ सन्तुष्टि कहिले हुन सक्दैन मान्छे । हिजोसम्म एक छाक टार्नको लागि दु:ख गरेर बसेको मान्छे दुई छाकसम्म पुर्याउछ । एकले अर्कोलाई न चिन्ने ठाँउ रहेछ। एक घरमा मान्छे म’रेर सोकमा डुबेको बेला संगैको घरमा बिहेको भोजमा रमाउन सक्दा रहेछ्न मलाई अत्यास लाग्न थाल्यो अझै सन्तुष्टि हुदैन दिनमा सात पटक भोजन गर्नको लागि दौडिरहेको हुन्छ । असम्भव त केही छैन सम्भव छ । गोर्खा जिल्ला आरु चनौटेमा जन्मिएकी म । मध्यम परिवार त्यही माटोमा हुर्किए,कति पटक चिप्लिए,गाउँ कै स्कुलमा क ख रा पढे,मेलापात सकेसम्म गरे पनि। घरकी जेठी छोरिको रुपमा जन्मिएकी म मेरो छर
Nov302019 by onlinenewsNo Comments
कण्डम निःशुल्क हुँदा प्याड किन निःशुल्क भएन, स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू ?
आज बिहानदेखि तल्लो पेट दुखिरहेको छ । चिसो महिना लागेदेखि नै महिनावारी हुनु एक हप्ता अगाडिदेखि ढाड दुख्ने व्यथा बोनसमा पाएको छु । सँधै जस्तै यो महिना पनि कहिले महिनावारी हुने हो केही पत्तो छैन । महिनै पिच्छे तालिका बदलिन्छ । कहिले महिनाको सुरुमै त कहिले महिनाको अन्त्यमा। निश्चित समयमै महिनावारी नहुने यो समस्याले गर्दा पुर्व योजना अनुसार केही तयारी गर्न पाउँदिन । अनि खुबै ढाड दुखेको छ । ब्यागमा प्याड बोक्नै भुलेछु । कार्यालयमा साथी भएको बेला त साथीलाई भनेर बेलैमा कोठा निस्कन नि पाइन्छ । साथी बिदामा भएको बेला एक्लै कार्यालयमा हुँदा धेरै पटक मलाई आपत आइलागेको छ । कार्यालय बन्द गर्न पनि नमिल्ने योनिबाट बगेको रगत रोक्न सकिने त कुरै भएन । आज मैले त्यही आपतको सामना गर्नु पर्ने निश्चित भएको छ । सहकर्मी साथी पुरुष हुन् । साह्रै गाह्रो भए मोटरसाइलमा राखेर घरसम्म पुर्याइदिन्छन् । तर प्याड भने कि
Nov232019 by onlinenewsNo Comments
रमेशजी बाँकी संसार हेर्न मेरो दुबै आँखा लिनुहोस्, म दिन तयार छु ! : ज्वाला संग्रौला
काठमाडौं। चर्चित लोकप्रिय सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने र कुशल वक्ता पव्लिक स्पिकर सिजन २ बिजेता रमेश प्रसाईंको आज धरानमा भेट भएको छ । उक्त भेटमा नेपालकै दुर्गम कालिकोट स्थित निर्माण हुन लागिरहेको रास्कोट सामुदायिक अस्पतालको लागि १ लाख नगद रुपैयाँ समेत हस्तान्तरण गरेका छन् ।यसै अस्पताल निर्माणमा लागिपरिरहेका समाजसेवी तथा सामाजिक अभियान्ता ज्वाला संग्रौलाको निकै ठूलो भुमिका रहेको छ ।र’वि लामिछाने र रमेश प्रसाईंको भेटमा देखिएको एक दृश्यलाई नियालेर एक भावुक स्टाटस लेखेकी छिन् । पढौ ज्वाला संग्रौलाको लेख जस्ताको तस्तै : जिन्दगीलाई पूर्ण बनाउन त कहिले पनि नसकिएला तरपनि जीवन्त बनाउने प्रयास भने निरन्तर गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा आज मैले यो तस्विर हेरेर सिकें। धन्यबाद छ ती नेपाल आमाहरुलाई जस्ले र’मेश प्रसाई र जस्ता छोराहरुलाई यो धर्तीमा पाईला टेकाईदिए। सानै उमेरमा बुबाआमा गु’माएर जिन्दगीका अनेकौ
Nov142019 by onlinenewsNo Comments
म दुईटा श्रीमान राख्छु, मान्छ त समाज ? दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुई श्रीमान राख्न दिंदैन ? … पुरा हेर्नुहोस्
रवीना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो विकिनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै विकिनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले ठूलै चर्चा पायो । उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि अभिनेता हुन् । अभिनेत्री कार्की र आयुष्मान प्रेम सम्बन्धमा रहेका गसिपहरु पनि मिडियामा छाइरहन्छन् । सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश साभार गरेका छौ :- महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ?मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँले एउटा ग्यादरिङमा हजुरवा, हजुरवाका तीनजना श्रीमती र छोराछोरी सबै जम्मा भए
Nov102019 by onlinenewsNo Comments
पूर्वयुवराज पारस शाह र समलिङ्गी मोडल सोनीका रोकायबीचको अफयर्स चलिरहेको खबरले यतिबेला चर्चा पाएको छ । पारससँग सङ्गत् बढेपछि सोनिकाले अश्लील हर्कतहरु पनि बन्द गरेकी छिन। सार्वजनिकरुपमै अश्लील तथा छाडा शब्दहरु बोल्ने र अर्धनग्न भएर हिड्ने जस्ता कार्यहरुले युटुबर समेत रहेकी सोनीका बेला बखत चर्चामा आउने गरेकी छिन । तिनै सोनीका पूर्व युवराज पारस शाहसँग एकदमै नजिक बनेकी छिन । यो कुरा उनी आफैले स्वीकार गरिसकेकी पनि छिन । पारस सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानीका लगातार भावुक फेसबुक स्टाटस केहि समयअघि थाइल्याण्डकी एक युवतीसँगको सम्बन्ध बाहिरिएपछि पारसपत्नी हिमानी शाह दुखि बनेकी थिइन । अहिले पनि पारस सोनीकासँग नजिकिएपछि हिमानीले लगातार फेसबुकमा भावुक स्टाटस लेखेकी छिन । हिमानीले अक्टोबर ३० मा आफ्नो फेसबुक फ्यान पेजमा लेखेकी छिन् – ‘मान्छे चाहे जतिसुकै पढेलेखेको , धनी , आकर्षक अनि बुद्धिमान भएपनि यदी उ कु
Nov82019 by onlinenewsNo Comments
विदेशी पैशा खाएर राजालाई गा ली गर्ने हक कसैलाई छैन , राजाले पैसा खाएर देश वेचेको इतिहास छैन | समर्थन गर्ने सबैले सेयर गरौंला
डा. प्रेम सिंह बस्न्यात नेपाली सेनाका पूर्वब्रिगेडियर जनरल हुनुहुन्छ । सैन्य इतिहासमा विद्यावारिधि गर्नुभएका बस्न्यातले धेरैवटा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । १४ पुस्तक लेखिसक्नु भएका बस्न्यातका दुई पुस्तक प्रकाशोन्मुख छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताबारे कडा र स्पष्ट बस्न्यातले यसपटकको अन्तर्वार्तामा निम्नानसारका धारणा राख्नु भएको छ– म पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिबाट उत्साहित छैन । मैले बुझेको जनता पनि उत्साहित छैनन् । जनता पनि दुई खालका छन् । एक स्वतन्त्र म जस्ता जनता र अर्को पार्टीका कार्यकर्ता । अहिलेको राजनीतिबाट खुसी भएको भनेको पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । अहिले यस्तो माहोल सिर्जना भयो कि ६२/ ६३ को आन्दोलन पछि कसैले पनि शिक्षक, कर्मचारी, डाक्टर पाइलट, खरदार मुखिया, सुब्बा जे हुन पनि पार्टीको झोला बोक्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अझ राजदूत र भिसी हुनका लागि त यस्तो धेरै आवश्
Nov32019 by onlinenewsNo Comments
सुष्मा देवकोटा -५ बर्षकी छोरीकी आमा भै सकेकी एकजना सफा च’रित्रकी साथीले पहिलो पल्ट मलाई सुनाई के गर्नु यार सुष्मा बुढो आफूलाई पुगेपछि उता पट्टी फर्कीएर मज्जाले सुत्छ, आफूलाई नि’न्द्रै लाग्दैन । केही महिना पछि उसलाई फोन गर्दा उसले अर्को स’मस्या सुनाई खोई के भको हो यसलाई केटीसंग पल्केर हो की के हो मेरो र छोरीको त वास्ता ब्यास्ता गर्दैन फेसबुकमा मात्रै झुण्डि रहन्छ । मैले श्रीमान श्रीमतीबिचको सामान्य कुरा सम्झेर उसलाई सम्झाएँ । उ अफिसमा काम गर्छे, लोग्ने र छोरीको पनि राम्रै ख्याल राखेकी छ। बुढाबुढीमा हुनुपर्ने सबै ब्य’वहार सामान्य छ । दुवै पट्टीका परिवारका प्रिय बुहारी ज्वाईं हुन् । पैसा छ, सुविधा छ सबै राम्रो छ तै पनि उसले पछिल्लो समय पटक-पटक यो कुरा दोहोर्याईरहेकी छ । उ शिक्षित महिला हो, श्रीमानलाई चौपट्टी माया गर्छे, तर पनि उ खुशी छैन भन्ने अर्थमा समाजले त उसलाई चरित्र गलत भएकी, सेक्स ध
Oct252019 by onlinenewsNo Comments
Oct242019 by onlinenewsNo Comments
र्‍याप हान्नेलाई भन्दा पहिला रे’प गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ सरकार..
काठमाडौं / भिटेन नामले परिचित चर्चित र्‍यापर समीर लामा पक्राउ परे सँगै यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी चर्चा चलिरहेको छ ।सकारात्मक, नकारात्मक टिप्पणी भरिभराउ सामाजिक सञ्जालमा सेलिब्रेटीहरुले पनि आफ्नो धारणा स्टाटस् मार्फत व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यस्तै’ चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका भुमिका गिरीले फेसबुकमा रे,प गर्ने जे,ल हाल्न अनुरोध गरेका छन् । पढ्नुहोस् गायिका भुमिका गिरीको स्टाटस् : र्‍याप हान्नेलाई भन्दा पनि पहिला रे,प गर्नीलाई जे,ल हाल न सरकार… भिटेन नामले चर्चित र्यापर समिर घिसिङले ‘यस्तै त हो नि ब्रो’ बोलको गीत युट्यूवबाट हटाएका छन् । उनले प्रहरीको आदेशमा यो गीत युट्यूवबाट हटाएका हुन् ।तर, गीत हटाए पनि उनी छुटेका भने छैनन् । प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थपका लागि उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त ललितपुर पठाइएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए । बिही
जन्म दिनमा पे*न्टी उपहार पाएपछि भाइरल दोहोरी गायिका कला लम्साल लाजले भुतुक्कै
अन्तत: आलिया र रणबीरको विवाह हुने पक्का, काश्मिरमा विवाहको तयारी